Zinnada oo noqotay cudurada layska dhaxlo midka ugu daran!!
Xamdi iyo mahadnaq waxay usugnaatay Allaha awooda sare leh, naxaris iyo nabadgalyo ha,ahaato suubanaheena muxamed(csw) aamiin aamiin
Ugu horeen intaan ugalin dhaxalka iyo dhibaatada ziyanada waxaa xusid mudan in zinada lagu xaarameeyey dhamaan kutubihiii lasoo dejiyey oo xukunkeeduna isku mid ahaa rag iyo dumar, shabaab iyo shayb . Dhilaysiga(zinnada) jinsi ugaaraa malahan waloow dadku sheeg sheegaan in 2da jinsi midkood kubadan yahay sameenteeda, balse waxaa xadiis saxiixaa kusoo arooray in Alle (sw) ubuuray 100dareen(shahwo) 99 kamidaa dumarka ayaa lasiiyey halka sooharayna ragga ayaa lasiiyey, silamidaa Alle(sw) wuxuu abuuray 100 xishood 99 kamidaa dumarka ayaa lasiiyey halka sooharayna raguu ubaaqi noqday. Waxaa halkaa culimada diinta kuxeel dheer kafityoodeen in dareenka dumarku kaxoog badan yahay midka ragga haddii aan lagu kaalmeen laheen xishoodka ay halis alaah lahaayeen dumarka shartooda!! Hadaba zinnadu waxay kamid tahay danbiga 2aad ee Alle agtiisu ugu weyn marka laga reebo shirkiga, qatarteeda taasaa udaliilaa.
Waxaa sidoo kale laga weriyey imaamu shaafici(rc)ama zayid Ali abii daalib(rc)midkood in ruuxii kuzineesta firaash qurux badan in isna gabartiisa, naagtiisa, walaashiis, ama hooyadiis looga zineesan darbi cidlaa xumaanta ay leedahay awgeed marka ruux kastaa waxaa lagudboon inuu kafogaado zinnada waayo waa deen layskaga guddo dunida guudkeeda. Ruuxii ummada nabad galshaa isna ehelkiisa ayaa loonabad galshaa aduun iyo aaqiyo.
Qarnigan iyo kii tagayba waxaa dunida kusoo batay cuduro aan la,aqoon daawadoooda iyo sababaha dhaliyey, tusaale ahaan cudurka IDS-ka waxaa sababay dhilayziga(zinada). Dhaqaatiir udhalatay dalka France ayaa sheegtay in cudurka IDS-ka oo luqadooda lagu yiraahdo ZIDA in uu lamacnayahay Zinada oo diinta islamku sheegtay dhibaatadeeda sidaa awgeed waxay dadkooda kubooriyeen in ruux kastaa lamaanihiis ku,ekaato oo xadgudubka sharci darada lajoojiyo.
Dhibaatoyinka iyo goobaha zinnadau kubadan tahay!!
Dhinaatooyinka ugu daran ee laga dhexlo zinadda waxaa kamidaa ruuxa oo kasabkiisa yaraado, nuurka wajiga iyo jirka oo daciifo, tabardari joogtaa, dabeecad qalafsan oo uu dadweenaha kula dhaqmo, xishood darri iyo waxyaablo kaloo aad uxunxun. Goobaha Zinada laga helo waxaa kamida shineemooyinka oo zinada laga barto daawashada film-da waayo waxaa hubaalaa in TV-ga daawashadiisa 2 arimood laga barto oo kala ah dhilaysi ama tuugeesi(xatooyi) 2daas arimood midkood ayuu kusifeesan yahay qofka daawada film-da anshaxa daran, waayo fariistaas ayeen dadka gaarsiiyaan film-da, waxaa kaloo zinada laga barta goobaha xun xun sida meelaha loo qayilaad doonto oo waayadan danbe isku bedeshay in hadii laan lacalaliyo lugna lajiido naruuro tahay, silamidaa goobaha dhalinyaru kubadan tahay sida,jaamacadaha, dhugsiyada sar sare iyo college-yada ayaa kuhadal heenta haasaawaha kubadan yahay halkaas oo shaydaanku wax maleegi karo maadamao shabaab kubadan yahay goobahaas.
Sidee looga hortagaa Zinnada?
Alle wuxuu raga armay inay indhahooda ku,eegin dumarka, Dakar koodana xafidaan sidaa ayay aduun iyo aaqiyo libaan kuhelayaan, silamidaa Alle wuxuu dumarka faray wuxuu ragga faray iyo inaysan jirkooda muujin oo uu cawro yahay inta yaree laga reebay maahee. Talaabadan waa habka kaliyaa ee zinanda looga hortagi karo. Waxaa kaloo haboon waxyaalaha munkarka meeshuu kubadan yahay inaadan tagin sida rubaayadaha, shineemooyinka IWM – Owoog xibinkastoo jirka kamidaa inay zineesankarto balse coorada hoose ugu dara n tahay –macnaa dhagaha, indhaha, gacmaha waa lagusameen karaa zinno danbina waa kaasoogarayaa.
Waxa aad iyo aad iigu yaab badneed maraan nasiib uyeeshay meeluu qudabad kajeedinaayey baadari France-siis oo kusugnaa dalka Djabouti inuu dadka kula dardarmaayey inay zinada joojiyaan oo ruux kastaa ku,ekaato wuxuu heesto. Murtida soomalida waxaa kamidaa hadaad aragto habar balaayaa waxay ahaan jirtay gabar balaayaa –taasoo loola jeedo qofka qofka wuxuu caado kayeeshay rayanatiisa waynaantiisana waa dabo socotaa--- hadaad dhilay ama dhilo ahaan jirtay faracaaga waa kusooduxee ileen deen qabaad aheedee Ilaahoow magantaa!!
Soo layaab maahan in ninna uusan jecleen in walashiis, hooyadiis ama gabartiisa laga dhileesto misana isagu zineesan gabadha oo falkas xun kusameen nin ayaa dhalay, lahdashay, dhashay ee ninkii doonaayo in owlaadiisa unabdgashoo iska nabadgali-
Tolo waayo arag:-
Dadkoo waa danbaabaan waxase uqeer badan kuwa intay danbi galaan ilaahooda soxasuusta oo danbi dhaaf weediisto. Ruux marxuum ayaa iisheekeeyey wuxuu iisheegay inuu aad iyo aad shaydaaku uga xoogbadtay oo uu kazineesan jiray dumarka ay kujirana kuwooda xaslayaasha ruuxaas qudhiisu xaas iyo gabdho badan ayuu lahaa, waligiis kumusan fikirinin dhibka uu raga kale ugeesan la,aargudi doono ilaa uu kuwaano qaatay oo indhihiisu ku,arkay xaaskiisa oo nin kula jjiifo sariirtiisa iyo gabadhisa oo darbi xun looga diin gudaayo –marka Alle miyuusa cadaalad aheen oo xumaam in xuman lagu gudo nafarin marka taas waxaa laga qaadan in ummada layska nabdgalso sinabad aad uheso,
NB: marxumka isagaa afkiisa iiga qisooday inaan xantona ulamo jeedo ee waa wax aan kucadeenaayo qoralkeega mana jecli in aan xuuk aduunka iiga danbeyo aan ninkas magaciisa usheego , mahadnasidiin